Nhau - SGIA 2016 kuUSA
SGIA 2016 kuUSA
Iyo SGIA inoratidza 2016 kuLas Vegas yaive hombe uye inotyisa seguta iri kuitisa. Isu kuASIAPRINT taifara kwazvo nezvekuratidzwa uku nekuti tanga tine chikonzero chinopfuura chimwe chete chekunzwa kudaro. Kwete chete nekuti isu tine inoshamisa kubhururuka kwemaawa gumi nematanhatu asiwo kusangana nevanhu vane hunhu uye vane mutsa muLas Vegas.
Isu takaratidza iyo Luxury Calendra Heat Press - Yakanyanya kupfuura nguva yedu kwenguva yekutanga kuSGIA Expo 2016. Iyo yakasarudzika calandra muchina uyo unoratidzika kunge unokatyamadza vatengi vedu nekumhanya kwazvo uye kugona kwaive kumwe kuratidzwa pachiratidziro. Uye isu tine mutengi mumwe akange araira pamberi peSGIA, saka hatifukidze mari yakawandisa kutumira michina kumashure kuChina. Zvimwe zvinokwezva zvekuratidzira kwedu yaive hombe fomati yakadzika 100x100cm (39 `` x39 '') yekudhinda yekupisa. Uye wechitatu muchina uri 40 * 50cm (16 `` x24 '') kupisa muchina ine chaiyo kupisa uye PLC control panel. hakusi kuwedzeredza kutaura kuti takave nekukwezva vashanyi vazhinji uye takagadzira vamwe vatengi vatsva.
Yese michina iyi yakaedzwa needu epamberi uye epamberi machira emhando pachiratidziro pachayo uye nerombo rakanaka kwatiri, takavatengesa vese muSGIA.
Musika weUS ndiwo musika uri kukura wekupisa muchina wekudhinda sezvo Kudhinda Pane Kuda kuri kukura maererano. Ticharamba tichitsvaga nekutarisira pamusika uyu nekugadzirisa nzira yedu yemusika. Kune vazhinji vanotungamira vatengesi muexpo iyo inomhanyisa zvirongwa zvedu. Saka Usazeze kutibata nesu kana uine mamwe matsva mazano ako
Tinoda kutenda vese vakapinda pakuratidzira uye vakaita kuti ibudirire kwazvo Uye zvirokwazvo kutenda kukuru kune vese vatengi vedu vakavimbika, pasina avo vatisingazove.
Isu takanangana nekugadzira nyowani yekushandisa-yakavakirwa uye yevatengi-yakatarisana nemikana bhizinesi mikana, kunyanya kudhinda & kupisa Press mhinduro. Ruzivo rwedu rwakasiyana sehuwandu hwezvigadzirwa zvatinopa nhasi, uye tinodada nekuve takashanda nevamwe veanotungamira masangano ekusimudzira, akadai seUSA, Mexico, Thailand, Serbia, Vietnam zvichingodaro. Nemakore ekuziva ruzivo uye kuraira kwevatengi vedu vanobva pasirese pasirese, Jiangchuan Boka rinovhura chitsauko chitsva- ASIAPRINT, tarisa kuvhura yedu brand uye zvigadzirwa kunze kwenyika.Asiaprint ichatungamira mutsva maitiro uye shanduko mumunda wekudhinda / kupisa chinja tekinoroji. Mune ramangwana, Asiaprint inoramba ichivandudza zvigadzirwa zvedu uye ichiburitsa zvimwe zvigadzirwa zvine zvigadzirwa.
Post nguva: Mar-26-2021
Asiaprint inobata pfungwa ne "S ...
Nhasi isu takatumira kunze aya maviri roller kupisa muchina wemuchina kuVietnam. Roller kupisa kupisa michina yekuraira izere nemwedzi miviri iyi uye nokutendeseka kunonoka mamwe maodha uye kukonzera iyo inconvie ...
Maitiro Ekushandisa Iyo Iyo Roll Kutenderera Heat Pres ...
Kushanda Nhanho 1. Ita shuwa kuti unobatanidza magetsi matatu phase simba mushe. Dhinda bhatani re "Blanket Enter", gumbeze rinoswedera padhiramu uye "Blanket Action Indic ...
ASGA 2017 kuVietnam
Iyo ASGA Show kuVietnam yaive budiriro huru gore rino futi. Michina yedu yekudziya yekupisa zvakare yakafarikanya mukurumbira senge zvataitarisira. Sezvinoenderana nekushandisa kwavo, tinoisa muchina wehupfumi nemitengo yakanaka ku ...
Sei Kuchinja Thermal Oiri?
Kuita kwemafuta ekupisa: Kupisa Kwekudziya Kwekuita, kugona kwakanaka kwekushisa, kugona kwakanyanya kupisa uye coefficient of thermal conductivity. Nekudaro, mafuta anopisa anozoitika Chain kutsemuka betw ...
Iyo SGIA inoratidza 2016 kuLas Vegas yaive hombe uye inotyisa seguta iri kuitisa. Isu kuASIAPRINT taifara kwazvo nezvekuratidzwa uku nekuti tanga tine chikonzero chinopfuura chimwe chete chekunzwa kudaro. Kwete chete nekuti isu tine wonde ...
Kero: Floor 1-1, Dajiangyun Street, Longgui South Village, Guangzhou guta, Guangdong dunhu, China
Fax: + 86-020-28139689
© Copyright - 2016-2021: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.